Yiziphi amagama angukhiye kanye nemigomo yokusesha okuzokwenza ukuthi ithrafikhi ku-Amazon yami ibhalwe ngendlela engcono kakhulu?
Asikho isidingo sokuthi ucwaningo lwegama elingukhiye luphakathi kwezingxenye ezisemqoka ku-Search Engine Optimization (SEO). Kulula, akekho enye indlela yokuthuthukisa ukubonakala kwakho kwewebhu kuwebhu noma ibhulogi ekusesheni kwakho kwasekuqaleni kwe-Google okuhlinzekwe yi-intanethi ye-intanethi enkulu. Lapha nje kuphela ukuthi kubaluleke kangakanani amagama angukhiye afanele. Kodwa ezweni lanamuhla le-ecommerce kanye nokuncintisana okukhulu kwebhizinisi lokuthumela phansi, indaba ehlukile kakhulu.
Kusho ukuthi kuwo wonke umakhi womakhi we-niche noma noma iyiphi indawo yokuhweba ethandwa kakhulu (njengemakethe e-intanethi e-Amazon ngokwalo) kunezici ezithile eziphathelene nokucwaninga ngegama elingukhiye okufanele kungalokothi kunganakwa. Ngokufanayo kufana nesimo lapho udinga ukushayela ithrafikhi eya ohlwini lwe-Amazon - melo 2 changer resistance. Into yukuthi kungenzeka ukuthi yindlela ewukuphela kokuhlela uhlu oluyinhloko oluhlelekile lwamagama angukhiye okuthengisa okuphezulu ukuze ukwazi ukuyisebenzisa ngaphakathi ohlelweni lokusesha okuphambili lokusesha.
Yingakho ukuqhuba ucwaningo lwegama elingukhiye olujulile elibhekiswe ngqo ekuhlosweni kwesokudla okungenzeka ukuthi kuyindlela ewusizo kuphela yokuhambisa umgwaqo osebenzayo ohlwini lwe-Amazon yakho. Ngamanye amazwi, konke okudingayo ukubeka ukugxila okunamandla ikakhulukazi emncintiswaneni nokuhlaziywa kokuziphatha ukuhlangabezana nezinhloso zokuthenga kanye neminye imizwa evamile eyenza izinqumo ezivamile zomuntu ngaphambi kokuba abantu bazinikele ekuthengeni. Futhi kukhona ezinye izindawo eziyinhloko ngokuvamile eziphathwe amagama angukhiye, okuhloswe hhayi nje ukuguqula kahle kodwa ukwenza imali yangempela emva kwakho konke.
Ngakho-ke, nakhu okwenza "amagama akho angukhiye egolide," futhi okungukuthi ikhono labo lokuqhuba ngempumelelo ukuhamba komkhiqizo wakho ku-Amazon. Ekugcineni, ukuze uzuze embonini yebhizinisi ehlelwe ngokuphelele, okufanele ihlelwe futhi ihlonishwe kahle kangangokuthi abantu balungele ukuvula izikhwama zabo futhi bachithe ngokungaboni - noma yiliphi inani lemali elidingekayo ukuze bathole lo mkhiqizo oyifunayo.
Izici Ezinhlanu Eziyinhloko Zezingqikithi Ezingaphezulu Zokukhiqiza Eziphezulu
I-Volume Enough Search - ngamanye amagama, "igolide" futhi yonke eminye yemigomo yokusesha ekhethekile eyenzelwe phezulu yenzelwe ukuba nekhono lokushayela ngempumelelo ukuhamba komkhiqizo wakho ku-Amazon, noma nanoma iyiphi enye iwebhusayithi ye-niche enezentengiso.
Kulula ukukala - kusho ukuthi kulindeleke ukuthi babe nezinga lokuncintisana elingavumelani noma elingaphansi, ngesikhathi esifanayo kubonisa ukuthi igama ngalinye elingukhiye okwamanje lifunwa kahle futhi livame ukusetshenziswa abathengisi abakhuthele bathatha ingxenye yengonyama yezinqumo zabo ukuze bathenge ikakhulukazi kwi-intanethi.
Isisusa Sokusesha Okunamandla - sigcizelela ukuthi izixazululo zakho zegama elingukhiye elihle kakhulu zenzelwe ukuthwala izinga eliphezulu lokuthengisa, ngakho-ke kwenza kube lula ngabantu ukuthi basebenzise imali - ngokoqobo uma benokuqala ukubheka kulelo gama elingukhiye, isibonelo esibonakala ngqo ohlwini lwakho lokufakwa ohlwini.